अमेरिकी अस्पतालबाट नेपाली विद्यार्थीले पाए १३ अर्ब बढी क्षतिपूर्ति ? कसरी र कस्तो छ त्यहाँको नीति ?
सबै बिरामीहरुसँग नैतिक, सम्मानजक र दक्ष मेडिकल सेवाको अधिकार छ । र प्रायः अवस्थामा अमेरिकाभरका अस्पतालहरुमा यो कडाइका साथ अपनाइन्छ । तर यति हुँदा हुँदै पनि हरेक वर्ष त्यहाँका २ देखि ४ लाख अस्पतालहमा बिरामीले कुनै न कुनै प्रकारको लापरबाही या गलत व्यवहारको सामना गर्छन् जसका कारण कतिको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । यसरी अमेरिकामा मृत्युको प्रमुख कारणमा चिकित्सा त्रुटि पनि शीर्ष स्थानमै पर्दछ ।
मेडिकल क्षेत्रमा हुने लापरबाहीले बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानि पुर्याउँछ । यसमा ससाना गलती र हेल्चेक्र्याइँले पनि तिनको जीवनै बदलिदिने असर परिरहेको हुन्छ । अमेरिकामा मात्र यस्ता सयौँ घटना भएका छन् जसमा कतिपय मुद्दामा अस्पतालले लाखौँ, करोडौँ डलरको क्षतिपूर्ति दिनुपरेको छ ।
हालैको यस्तो घटना हो मिनेसोटाको सेन्ट क्वाउड मेडिकल सेन्टरमा १९ वर्षीय नेपाली विद्यार्थी अनुज थापाले अस्पतालको लापरबाहीका कारण बायाँ खुट्टामा नराम्रो क्षति पुगेपछि सो मेडिकल संस्थाले उनलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप ११ करोड डलर तिरेको छ ।
जनवरी २०१७ मा पहिलो वर्षका विद्यार्थी थापालाई एक फुटबल खेलका क्रममा खुट्टामा चोट लागेपछि एम्बुलेन्समा हालेर सेन्ट क्लाउड हस्पिटल लगिएको थियो । यसमा डाक्टरहरले उनको खुट्टा भाँचिएको ठहर गर्दै तत्कालीन डाक्टर च्याड होलियनले उनलाई शल्यक्रिया गर्न सुझाव दिए जसमा अनुजले सहमति जनाए ।
यसपटक चाहिँ उनलाई अर्कै अर्थो फिजिसियनले शल्यक्रिया गर्न लगे । यसमा उनले अनुजलाई ‘एक्युट कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम’ रहेको पत्ता लगाए जसमा उनको खुट्टाका मांसपेसीहरु खैरो भइसकेका थिए ।
त्यसबेलादेखि अनुजले २० वटाभन्दा बढी शल्यक्रिया गराए । अस्पतालविरुद्ध जारी गरिएको कानुनी मुद्दाकाअनुसार अस्पतालले सुरुवातमै अनुजको मेडिकल अवस्था पहिचान गर्न असफल भएकाले नै उनी यति ठूलो स्वास्थ्य समस्यामा परेका हुन् । यसले उनको खुट्टामा वास्तवमै कहिल्यै ठीक हुन नसक्ने नोक्सानी गरायो ।
यसपछि अन्ततः अस्पतालले उनको विगत र भविष्यको पीडा, मानसिक वेदना अनि मेडिकल खर्चको क्षतिपूर्ति स्वरुप १११ मिलियन अर्थात् ११ करोड डलर प्रदान गरेको हो । यो भनेको नेपालीमा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैँया हुन्छ ।
तर अमेरिकामा यति ठूलो रकमको मेडिकल क्षतिपूर्तिको यो पहिलो घटना भने होइन । सन् २०१९ मा अमेरिकाको मेरिल्यान्डकी एक महिलाले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल क्षतिपूर्ति पाएकी थिइन् ।
जोन हप्किन्स बेभ्यु मेडिकल सेन्टरमा एरिका बाइरोमले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् जसको मस्तिष्कमा अस्पतालको लापरबाहीकै कारण गम्भीर क्षति पुग्यो । यसपछि अदालतले उनलाई २० करोड ५० लाख डलरको क्षतिपूर्ति दिइने फैसला सुनाएको थियो ।
त्यस्तै २०१८ मा पनि मिचिगनको गलत तरिकाले शल्यक्रिया गरेपछि डेट्रोइट मेडिकल सेन्टरको बाल अस्पतालमा दश वर्षीया फेथ डिग्रान्ड आंशिक रुपमा प्यारालाइज्ड भएका थिए ।
यत्मिात्र नभएर गलत शल्यक्रियापछि पनि उनीहरुले फेथको जीवनलाई खतरामा पारेर उपचार जारी राखेको पाइएको थियो । यससैको मुद्दामा अस्पतालले उनलाई १३ करोड ५० लाख डलर क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।
यता २००६ मा फ्लोरिडामा स्ट्रोक सम्बन्धी पारिवारिक इतिहासबारे थाहा पाएर पनि डाक्टरहरुले एक बास्केटबल खेलाडीको लक्षणलाई साइनस इन्फेक्सन भनेर पेनकिलर दिँदै घर पठाएका थिए । त्यसको अर्को दिन नै उनको मस्तिष्क सुन्निएपछि उनलाई इमरजेन्सीमा अस्पताल ल्याइएको हो । यसको अर्को तीन महिना उनी कोमामा रहनुपरेको थियो । यसले उनको दिमागी क्षमतामा हस आउनुका साथै उनलाई खाना निल्ने लगायत थुप्रै स्वास्थ्य समस्या भयो । उनलाई २१ करोड ६७ लाख डलरको क्षतिपूर्ति दिइएको थियो ।
यसमा आश्चर्यजनक कुरा के छ भने यी मुद्दाहरुमा प्रायः पीडितलाई जित दिलाउन अत्यन्तै कठिन हुने गरेको पाइन्छ । पहिलो कुरा त यस्ता १० प्रतिशत भन्दा कम मुद्दा मात्र अदालतसम्म पुर्याइन्छ । त्यस्तै प्रायः अवस्थामा डाक्टर, अस्पताल लगायत अन्य विरोधी पार्टीले जित्ने गरेको पनि देखिएको छ ।